Prof.Galaydh “Somaliland waxaanu u Tagaynaa danta iyo Wada Hadallada inoo Furmay” |
Buuhoodle (GNN)- Hoggaamiyaha kooxda Khaatumo, Cali Khaliif Galaydh, ayaa sheegay inaanay u joojinaynin cid kasta oo ka soo horjeeda wada-hadallada u bilaabmay Somaliland iyo kooxdiisa, waxaanu daboolka ka qaaday in wada xaajoodka labada dhinac la sii ambo-qaadi doono inta aanay dhammaanin Bishan October.
Siyaasi Cali Khaliif Galaydh, waxa uu sheegay in aanay haynin wax Somaliland uga wanaagsan waxaanu mar kale ku celiyay inay xushmeeyeen jiritaanka Khaatumo. Mr. Galaydh, waxa uu sidaasi ku sheegay khudbad uu ka jeediyay fadhi baarlamaanka kooxdiisu ku yeelatay Magaaladda Buuhoodle.
“Wada hadallada Somaliland iyo Khaatumo way socdaan, inkasta oo ay raageen haddana bishan October, inta aanay dhammaanin ayay qabsoomayaan, wax la qarinayana ma aha. Reerku haddii uu guurayo lama qaraniyo ee duhur cad ayaanu guuraynaa cid loo joojinayaana ma jirto. Hargaysa-da ay sheegayaan-na waanu tegaynaa, hase ahaatee ma aha socdaaladii hore, waxa loo tegayaana waa wada hadalka ay soo dhaweeyeen Somaliland, wada hadalkaas oo ay innaga diideen qaar aanu qabno inay innaga xigaan,”ayuu yidhi Cali Khaliif Galaydh.
Cali Khaliif waxa uu sheegay waxa qudha ee u baahan in laga fikiraa ay tahay waxa ay la tagayaan Somaliland, waxaanu yidhi “Hadda waxa keliya ee innoo yaalaa waxa weeye war maxaynu la tegaynaa Somaliland, maxaynu kala hadlaynaa?, qolyaha isimada ah ee aad maqlaysaan tigidho iyo safaro ayay Garoowe u tagayaan waxaan idiin sheegayaa inay Hargaysa innooga horeynayaan waxa Garowe laga yidhi.”
“Ninbaa guri inta uu hoosta ka xidhay far taagay, markaasaa loo bixiyey fartaag, war hooy wax qarsooni ma jiraan wax kastana waa la og yahay, annagu waxaanu danta moodnay iyo waxa aanu ka xisaabtamayno wax aanu iska hagranaynaana ma jirto.
Somaliland waxay na yeeshay waanu ognahay, haddana danta ayaa na tidhi wada hadalkooda. waxayna sharafteenu ku jirtaa innaga (Sool iyo Buuhoodle) oo mideysan oo isku dan ah ayay inoogu badinaysaa, haddii la diido ogow arrintu waxay noqon karis xun iyaduna wax ku la’. Gaallada waxa hal ku-dhigyadooda ka mid ah ‘Dagaal waliba mar buu dhammaadaa’,”ayuu yidhi Prof. Galaydh.
Siyaasi Cali Khaliif oo hadalkiisa sii watay waxa uu yidhi “Khaatumo ahaan, wada hadalkan waxa inala wadaaga dad badan oo aan Buuhoodle inala joogin oo ay ka mid yihiin aqoon-yahanno, dhaqaale-yahanno iyo aasaaseyaashii Khaatumo. Markaa waxa innoo balan ah midnimo.”